Ogaden News Agency (ONA) – The Telegraph – Markuu teleefoonkii dhacay ayay xaajada xumaatay Godey
The Telegraph – Markuu teleefoonkii dhacay ayay xaajada xumaatay Godey
Posted by ONA Admin	/ January 22, 2014
Wariyaha Wargayska The Telegraph Mr David Blair ayaa wuxuu Talaadadii ka sheekeeyay dhibka ka soo qabsaday markuu tagay Godey, halkaasoo lagu xidhay ka dib markuu Teleefoon ku hadlay. Sheekada wariyan qabsatay waxay ka waramaysa xaaladda uu ku sugan yahay dalka Ogadenya, isagoo sheegay inaan la ogolayn in Ogadenya la dhex tago oo laga soo waramo. Wariyaha oon tarjumnay qoraakiisa (Halkan ka akhri) ayaa sidan uga xogwaramay wixii ka soo qabsaday Godey. Wuxuu ku bilaabay:
Isagoo indha kulul igu fiirinaya ayuu sargaalkii nabasugidda oo magaciisa la’iigu sheegay Jamaal intuu ku dhuftay miiska alwaax uu gacanta ku hayay yidhi ; “ Ma Teleefoon ayaad dirtay” oo raaciyay; “ Toos ayaad xabsiga u galaysaa.”
Dalal aan badanayd ayuu teleefoon la diray keenaa dareenkaa xooga badan. Laakiin saddexdii maalmood ee todobaadkii taagay oon joogay Itobiya oo waardiye hubaysan ay si daran ii ilaalinayeen, waxaan bartay inay tahay qofka inuu socdo isagoo aad isu dhuubaya (walking on eggshells).
Markasta oo la’i horkeeno Jamaal ama sarkaal kale waxaan dareemayay in inaan xabsiga galayo hadaan sameeyo dhaq-dhaqaaq aan loo baahnayn ama aan dhoho ereyo aanan ka fiirsan.
Talaadadii lasoo dhaafay ayaa waxaa la’igu xidhay xabsiga Koonfurta Itobiya ee magaalada Godey. Sidaan la socono qofka wariyaha ah shaqadiisa ayay halis ku tahay inla xidho, hasaa ahaatee xaaladda aan ku sugnaa (Godey) inaan isku dhacayno dadka xukunka haysta waxay ahayd hubaal.
Itobiya dagaal culus ayay ka wadaa gobolka Ogaden oo Goodey ay ka tirsantahay, madaxda halkaa joogtana waxay aad isugu taxluujiyaan inay ka celiyaan oy ka horjoogaan indhaha wax fiirfiirinaya. Qofkasta oo ajnabi ah oo doonaya inuu booqdo waa inuu haystaa ogolaansho khaas ah – taasoo si joogta ah loogu diido.
Arintan waxay saxafiyiinta ku noqotay wareer. Hadaan weydiisan lahaa ogolaansho in la’i siiyo saan u aado Godey jawaabta ku hortaal marwalba waa “maya”. Waxay noqotay inaan ama ogolaado arin aan laliqi karin ama aan iska indhtiro amarka xukuumadda oon aado Godey. Waxaanse doortay arinta aan is-idhi way ugu dhib yartahay. Ma’aanan weydiisan codsi aan ku tago Gobolka Somalida Itobiya, oo ah magaca ay dawladda ugu yeedho Ogadenya,mana helin ogolaansho. Waxaan iska raacay dayaaradda tagta Godey.
Bilowgii waxwalba si fiican ayay ku socdeen. Waxaan ku dagnay 9:30 subaxnimo Talaadadii la soo dhaafay magaalada ay hareereeyeen banka iyo dhir yaryar, waxaanan maalintaa ku dhamaystay inaan ururusado xog. Waxay ii nqotay fursad aan sheekadii dheerayd een shalay u soo diray wargayska aan kaga qoro jabhada. Hasa ahaatee, markii la gaadhay 3dii galabnimo (sagaalkii galabnimo), ayay laba nin oo boolis ah oo hubaysan soo galeen hotel ku-sheegii aan daganaa. Ugu horeyn ixtiraam iyo adaab ayay u muujinayeen. Waxay i weydiiyeen baasboorka, markaan tusayna way iga tageen iyagoo ku qanacsan. Nus saac ka dib ayay soo noqdeen. “Na soo raac”, ayay isla markiiba yidhaahdeen.
Kama murmin. Waxay ii sii kaxeeyeen dhismo qarsoon oo darbi dheer ka dambeeya oo dhowr boqol oo mitir u jira hoteelka. Gudaha waxaan ugu tagay nin xoog badan oo dhar madani ah labisan oo isugu key sheegay Jamaal.
Su’aalo sahlan ayuu I weydiiyay. Kumaan ahay, maxaanan ka qabanayaa Godey? Waan ka dabaashay, waxaan idhi waxaan ahay saxafi ka socda Daily Telegraph waxaanan tusay baasaboorka iyo ogolaanshahii Saxaafadda Itobiya. Jamaal wuxuu ku soo ururiyay in aanan u haysanin ogolaansho Godey inaan imaado.
Isla markiiba wuxuu iga qaaday teleefoonkii, boogii aan wax ku qorayay iyo lacagtaan haystay, wuxuuna amray inaan ka bixin hoteelka inta la’igu celinayo caasimadda Adisababa. Waxaana si cad la’iiga mamnuucay inaan qofna kula hadlo teleefoon. Inkastoo Jamaal uu awood iyo dhiirinaan lahaa waxbuu isula hadhay. “Xabsiga waan ku dhigi karaa,” ayuu yidhi, “laakiin hadaan nahay Itobiyaan waxaan nahay dad soo dhaweyn leh”.
Sidaa daraadeed, waxaan ku soo noqday hoteelkaygii anigoy ila socdaa laba booliiska gaarka ah oo laba kalashoof wata. Maxamud iyo Ibraahiim ayaa labadii maalmood ee xigtay ila socday. Labadaba waxay ahaayeen laba aad u edeb badan – durbadiiba waxaan u dirsanayay cunto iyo biyo inay noo soo iibiyaan.
Hoteelka banaankiisa waxaa horey iyo gadaal u socday nin dheer oo qaarka hore qaawan oo iska qoslaya. Waxaan soo helay inay gacanta ku dhigeen kuwii ka horeeyay Jamaal waqtigii ay socotay doorashadii Itobiya 2005. Maalmo la jidh dilayay darteed ayuu la waashay.
Arbacadii lasoo dhaafay ayuu Jamaal isoo maray isagoo dhoola cadeynaya. War fiican ayuu ii waday. Wuxuu ii sheegay in waaga markuu baryo aan raaci doono dayaaradda Itobiya ee u socota Adisababa.
Isla markuu iga tagayba, waxaa dhacay arin la filayay. Xafiiskii u qaabilsanaa arimaha dibadda wargayska Daily Telegraph ayaa markay wax war ah iga waayeen laba maalmood, isla markaana uu u dhici waayay teleefoonkii la’iga qaaday ayaa waxay lasoo hadleen hoteelkii. Waxaan u sheegay siday wax u dheceen. Hasa ahaatee Maxamud iyo Ibraahim ayaa dhagaysanayay taleefoonka aan ku hadlayay. Sidaadii aan u dhgay teleefoonka, waxaa la’iisii qaaday xafiiskii Jamaal.
Aad ayuu u cadhaysnaa. “Waad jabisay amarkaan ku siiya” ayuu ku qayliyay. “Waxaan kugu amray inaadan teleefoon dirin”.waxaan u sharxay inuu xafiiskayga isoo wacay oo aanan aniga dirin. “Siday ku ogaan karaan lambarka hoteelka?” ayuu Jamaal i weydiiyay. Waxaan ugu jawaabay inaan siiyay lambarka hoteelka intaanan soo aadin Godey.
Jamaal magaraysan. “Xabsiga ayaad galaysaa, umana socotid Adisababa berry,” ayuu yidhi. Laba kala doorasho ayaan haystaa. Inaan sidiisa isxanaajiyo, taasoo ah go’aan khatar ah, ama aan ismiskiinyo. Midkan dambe ayaanan doortay. 10daqiiqo oo baryo iyo gadh-qabsi ah ka dib, Jamaal wuu ogolaaday. Xabsiga magalayo waxaanan u duulayaa Adisababa siduu qorshaha ahaa.
Waaga markuu baryay ayuu lacagtaydii oo idil iisoo celiyay, waxaana la’iisii qaaday dayaaradda. Laba nin oo hubaysan ayaa ila soo raacay – si aanan mindhaa uga boodin dayaaradda.
Dadkii dayaaradda ila saarnaa markay arkeen askarta hareeraha iga fahdida waxay u qaateen inaan ahay dambiile khatar ah. Waxba kama ogsoona in dambiga aan galay aragtida Jamaal uu ahaa teleefoonka aan ka jawaabay.
nathiir yare says:
waa dhib kaa oo joogta ah
waxaana lagaga bixi karaa in lahelo
Awood mility oo jowx ah
taasina waxay ku imaan kartaa in shacabku dhiidhiyo